Si toos ah Instagram - Instagram Auto Like
Instagram hadda waxay noqotay aalad lagama maarmaan u ah horumarinta sumcadaha casriga ah iyo kobaca dhagaystayaasha. Si kastaba ha ahaatee, la socoshada qoraallada Instagram ee maalinlaha ah ee joogtada ah iyo hawlgalintu waxay noqon karaan waqti qaadasho iyo daal. Oo yaan la iloobin sida uu tartanku u yahay Instagram.
U adeegsiga bot botka tooska ah ee Instagram ayaa jecel, waxay la mid tahay bixinta Instagram -ka si koontadaadu uga muuqato quudinta dadka iyada oo loo marayo xayeysiis la kafaalo qaaday. Awood -siinta wax -ku -oolka ah ee waxyaabaha la jecel yahay iyada oo loo marayo bot waa waxqabad u abuuraya boqolaal fursado koontadaada Instagram si ay u ogaadaan dad badan.
Markay Instagram -ku horumariso aqoonsiga is -dhexgalka otomaatiga ah iyo shirkadaha bixiya, waa inaad u diyaargarowdaa inaad tijaabiso adeegyo badan si aad u hesho midka kugu habboon. Laakiin nasiib wanaag, Waanu kuu samaynay oo halkan waa liiskeena 5ta Instagram auto sida bots ee ugu fiican 2021:
Ugu waxtarka badan autolike bot ilaa maanta – Raac Instagram Bot
Ugu adag waayo -aragnimo otomaatig ah – Dhiig -bax
Ugu fiican qiimo lacag – Farsamo
Ugu fiican macmiilka adeegga – Instazood
inta badan lagu kalsoonaan karo – Instamb
Maxaad U Isticmaashaa Gawaarida Sida Bot?
Kobcinta koontadaada Instagram waa hawl adag oo leh hawlo badan oo caajis ah oo loo xilsaaray. Adeegsiga bot si otomaatig loogu sameeyo ficilka la midka ah ee Instagram ayaa kaa caawin doona inaad si aad ah u kordhiso hawlgelintaada iyo muuqaalkaaga, oo waxaad heli doontaa waqti dheeri ah oo aad diirada saarto u gudbinta dhagaystayaashaada waxyaabo tayo leh.
Instagram bot-ka sida auto-ka ah oo kale ayaa kor u qaadi doona sumcaddaada Instagram wuxuuna badin doonaa heerka kobacaaga adiga oo u oggolaanaya koontadaada horeba inay dad badani ogaadaan.
Sida Loo Sameeyo Baabuur Sida Bot?
Si loo habeeyo baabuur sida Instagram bot, waxaad u baahan doontaa inaad sheegto bartilmaameedka aad danaynayso. Waxaad beegsan kartaa dadka, hashtags iyo goobo, iyo bot wuxuu u adeegsan doonaa macaamiishooda si ay u jeclaadaan qoraallada, taas oo iyaduna sii hurisa ka -qaybgalka is -weydaarsiga ee qaababka jecel. iyo dharka. Tusaale ahaan, haddii aad beegsato qof, bot bot -ka ayaa si otomaatig ah u jeclaan doona dhajinta macaamiisha la beegsaday.
Markaad otomaatig u sameysato waxyaabaha aad jeceshahay Instagram, hubi inaad si otomaatig ah u barnaamijto sida bot. Si aad u hubiso inaad si buuxda uga faa'iideysato aaladdan otomaatiga ah adiga oo aan khatar gelin koontadaada Instagram, waa inaad doorataa mod sida otomatiga oo kale oo bixiya :
Adeeg macmiil oo lagu kalsoonaan karo
Ku darista wakiilka
Xawaaraha isdhexgalka ee iswada.
Si kastaba ha ahaatee, waa inaad xusuusataa in bots -ka otomaatiga ah ee Instagram aysan ku siin doonin waxyaalo aan dhammaad lahayn, laakiin nuxurka tayada ayaa noqon doona. Xirfadaha tooska ah ee 'Instagram' ayaa adiga kaa caawin doona, laakiin tayada nuxurkaagu waa adiga.
Bots -ka ugu fiican ee otomaatig loogu jecel yahay barta Instagram
Haddii si taxaddar leh loola dhaqmo, waxyaabaha la jecel yahay ayaa ah is -dhexgalka ugu nabdoon ee lala yeesho kuwa raacsan oo si otomaatig ah looga dhigi karo barta Instagram. Iyo haddii aad diyaar u tahay inaad ka baxdo waxyaabaha jecel Instagram ee tooska ah, waxaa lagama maarmaan ah inaad naftaada ku hubeysid bot botka ugu wanaagsan ee Instagram bot oo si gaar ah loogu talagalay hawshan.
Iyo hada, waa markii aad si dhow u eegi lahayd liiskayaga 5ta bots ee Instagram auto jecel ee ugu fiican ee la isku dayo hadda.
Bogga Instagram: https://winchesclub.com/ibf
Qiimo: 9,99 EUR bishii
The Instagram Hyper Follower Bot waa aaladda ugu fiican ee kuwa raadinaya inay otomaatig u dhigaan Instagram -ka akoonnada kale si kor loogu qaado ka -qaybgalka is -weydaarsiga.
Waxaan ka door bidnaa Hyper bots -yada kale maxaa yeelay waxay sameyn kartaa inta badan waxyaabaha aad ka fileyso bot bot Instagram wax ku ool ah. :
Bartilmaameed caqli leh oo isku dhafan natiijooyinka ugu fiican
Robotyada nooca otomaatiga ah ee ugu raqiisan suuqa
Nabadgelyo weyn oo leh wakiil bilaash ah akoonnada isticmaalaha
Ikhtiyaarrada shaandhaynta xoogga leh
Tirada aan xadidnayn ee xisaabaadka IG.
#2 - Caabuq
Bogga Instagram: https://winchesclub.com/inflact
Inflact waa software otomaatig ah oo ay naqshadeeyeen dadka ka dambeeya Ingramer, oo waaya -aragnimadooda ayaa iska hadasha.
Bootkan loogu talagalay otomaatiga Instagram wuxuu leeyahay wax kasta oo aad u baahan tahay si aad u bilowdo koontadaada, laga bilaabo iswada ee jecel ilaa aalad qorsheynta, si istaraatiijiyadaada Instagram oo dhan hore loogu sii qorsheeyo.
Inflact waxay siisaa isticmaaleyaasheeda khibrad otomaatig oo adag oo leh astaamaha soo socda :
Bartilmaameedka hashtags, goobaha iyo magacyada isticmaalaha
Qalabka falanqaynta caqliga leh
Adeegyada Instagram ee waxtarka leh
Wax -qabadku wuxuu dedejiyaa soo -saarka dabeecadda dhabta ah ee aadanaha
Ikhtiyaarada lacag -bixinta qaybsan.
Bogga Instagram: https://winchesclub.com/instaboss
Qiimo: 11.90 EUR bishii
Instaboss waa adeeg otomaatig ah oo Faransiis ah oo sheegta inuu bixiyo aragti korodhsi iyo ka -qaybgal iyada oo otomaatig loo jecleysto iyada oo loo marayo bot -ka. Maxaa kala saara shirkadan, Waa go'aankeeda in ay taageerto mid kasta oo ka mid ah isticmaaleyaasheeda si ay u helaan 1,000 macaamiishooda ugu horreeya.
Tilmaamaha ugu muhiimsan ee bot otomaatig ah ayaa ah :
Midda labaad ee ugu raqiisan suuqa ee robotyada nooca baabuurta
Interface ee Faransiiska
Talo shaqsiyeed oo ay bixiso adeegga macmiilku
Ixtiraam u leh xadka ay soo rogtay Instagram
Ilaa 20 IG akoon.
Bogga Instagram: https://winchesclub.com/instazood
Qiimo: 13 EUR bishii
Instazood waa mid ka mid ah hormuudka suuqyada bot botka ee Instagram waxaana lagu yaqaanaa adeegga macaamiisha ee degdegga ah oo lagu kalsoonaan karo..
Astaamaha bot bot -ka Instagram -ku waa mid aad u fudud oo caadi ah :
Wada sheekaysi toos ah ayaa lagu heli karaa taageero la dammaanad qaaday 24 saacadood gudahood
Instagram bot wuxuu u habeeyay inuu si aan kala go 'lahayn uga shaqeeyo dhammaan aaladaha mobilada
Kala -shaandhaynta iyo ikhtiyaaraadka habaynta si otomaatig loogu jeclaado.
Bogga Instagram: https://winchesclub.com/instamber
Sababta aan ugu tixgalineyno Instamber inuu yahay kan ugu aaminka badan ayaa ah inay sameeyeen horumarkii ugu weynaa ee la -qabsiga isbeddelada ugu dambeeyay ee algorithms -ka Instagram..
Astaamaha ugu waaweyn ee laga heli karo robot -kaan si otomaatig ah u shaqeeya:
Ikhtiyaarada bartilmaameedsan ee horumarsan
Maareeyaha xisaabta si aad otomaatigaaga ugu ilaaliso xadka
Goobaha dhaqdhaqaaqa xawaaraha otomaatiga ah iyo shaandhaynta horumarsan
Algorithm dib loo habeeyay
Xisaabaadyo badan ayaa suurtogal ah.
Maxay tahay sababta aan u luminayo taageerayaasha Instagram-ka : 5 sababood iyo sida loo hagaajiyo
Maqaal horeWax walba oo ku saabsan hubinta barta Instagram
Maqaalka XigaSida loo helo likes badan Instagram-ka : 15 Talooyin iyo Apps ugu Fiican